PMC TV NEPAL :: डेटिङमा सोध्न नहुने प्रश्नहरु..... डेटिङमा सोध्न नहुने प्रश्नहरु..... - PMC TV NEPAL
विचार/विश्‍लेषण Sunday,3Nov, 2019
डेटिङमा सोध्न नहुने प्रश्नहरु…..
हिजोआज डेटिङ जानु सामान्य कुरा भएको छ । कुनै आकर्षक व्यक्तित्व भएको पुरुषसँग तपाईंको भेट भयो र यदि उसले तपाइर्ंलाई डेटिङको प्रस्ताव राख्यो भने तपाईंं त्यसलाई नकार्न सक्नुहुन्न । तपाईंं ती पुरुषसँग भेट्न जान उत्साहित बन्नुहुन्छ र कुन लुगा लगाउने, मेकअप कस्तो गर्ने र के गरगहना लगाउने भन्ने अनेक कुरा सोच्न थाल्नुहुन्छ ।
डेटिङ जाँदा तपाईंको आउट लुक राम्रो हुन पनि आवश्यक छ । किनभने राम्रो आउटलुकले नै तपाईंको व्यक्तित्व झल्काउँछ । आउटफिटभन्दा पनि आवश्यक कुरा हो तपाईंंको प्रस्तुति । तपाईंं डेटिङमा जाँदा सुन्दर भएर त जानु नै हुन्छ । त्यसले तपाईंको व्यक्तित्व राम्रो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, डेटिङको क्रममा गरिने कुराकानी कुनै बिषयको बारेमा बोल्नु र बोल्ने शैलीमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ ।
यदि यो डेटिङको पहिलो डेटिङ हो भने आफ्नो बोल्ने शैलीका कारण बनिसकेको कुरा बिगि्रयोस् भन्ने त चाहानुहुन्न अथवा तपाईंंको कुराकानी गर्ने शैलीबाट उसले तपाईंंको बारमा गलत धारणा बनाओस् र यो अन्तिम डेट होस् भन्ने पनि चाहानुहुन्न । यदि तपाइर्ं आफ्नो पहिलो डेट राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने के बोल्ने, कति बोल्ने र कुन-कुन प्रश्नहरु सोध्ने, जुन आफ्नो फस्ट डेटमा सोध्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ ।
के तपाईंंले अरु कसैसँग पनि डेट गर्नुभएको छ ?
यदि तपाईंं सिरियस रिलेशनसिप चाहनुहुन्छ भने यो कुरा थाहा पाउनु अति नै आवश्यक छ । तर, पहिलो डेटमा नै यो प्रश्न सोध्नु गलत कुरा हो ।
अहिले तपाइर्ं एक-अर्काको लागि अन्जान हुनुहुन्छ । पहिलो डेट तपाईंंको लागि पहिलो पाइला हो । त्यसैले एक-अर्काको बारेमा स- साना कुराहरु थाहा पाउनुपर्छ । मनपर्ने र मन नपर्ने कुराहरु थाहा पाउनुपर्छ । त्यस्तै ऊ कस्तो व्यक्ति हो जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ । तर, आवश्यकभन्दा बढी प्रश्न सोध्नु अथवा चाहिनेभन्दा बढी नजिकिनु भनेको इरिटेट गर्नु जस्तै हो ।
तपाईको तलब कति छ ?
एउटा व्यक्तिलाई उसको कमाई सोध्नु भनेको अति नै गोप्य र संवेदनशीलताको बारेमा प्रश्न सोध्नु बराबर हो । जसरी एउटा युवतीलाई उनको उमेर सोध्नु हुँदैन । त्यसैगरी एउटा युवकलाई उसको कमाईको बारेमा सोध्नु हुँदैन भन्ने धारण पहिलाबाट नै चलिआएको छ ।
पहिलो डेटमा नै पुरुषको कमाई सोध्नु हुँदैन । यसको जवाफ कतिले त राम्रोसँग दिन्छन् भने कतिले यसलाई अन्य अर्थमा लिने गर्छन् । तर, एउटा युवकलाई कति कमाइ छ भन्ने प्रश्नले मनमा चसक्क छुन सक्छ । यस्तो प्रश्नले उसको आत्म सम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ ।
के सिरियस रिलेशनसिपमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?
जिन्दगीमा सिरियस हुनु, सम्बन्धलाई गम्भीरताका साथ निभाउनु अति नै आवश्यक छ । आफूले रोजेको व्यक्ति नै आफ्नो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहना राख्नु कुनै गतल कुरा होइन । तर, पहिलो डेटमा नै आफू जस्तै ऊ पनि यो सम्बन्धप्रति गम्भीर छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन खोज्नु गलत हो । डेटिङप्रति पुरुषहरु त्यति गम्भीर हुँदैनन् ।
तर, पनि तपाइर्ं पहिलो डेटमा नै आफ्नो सम्बन्धमा गम्भीर होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो गलत कुरा हो । उसलाई बिस्तारै-बिस्तारै बुझ्नु, जान्नुपर्छ । जसले तपाइर्ंलाई यो प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै महसुस हुँदैन ।
तपाईंकाे असल साथी काे ?
कसरी छनौट गर्ने टिकाउ जुत्ता-चप्पल ?
थरीथरी प्रेमका प्रकार ।।
श्रीमानलाई खुसी बनाउने टिप्सहरू ।।
यस्ता केटाबाट बच्नुहोस् ।।
फिनल्यान्डका मान्छेहरु किन सबैभन्दा खुशी ?
बढ्दो आत्महत्या : कारण र प्रभाव
विवाह अगाडि हरेक पुरुषले बोल्छन् यी ८ झुट
असल पिता कसरी हुने ?
पाइन्टको पछाडि गोजीमा पर्स राख्दा कुन राेग ?
किन मान्छेलाई रिस उठ्छ ?